Armani dia manolotra ireo famantaranandrony vaovao miaraka amin'i Google Assistant | Androidsis
Armani dia marika lamaody malaza izay vao avy nanambara ny fivoarana vaovao miaraka amin'ny Connected Wear OS ary miavaka amin'ny fampidirana Google Assistant. Andian-dahatsoratra maranitra miaraka amin'ny fifantohana manokana amin'ny famolavolana, teny fiambenana ity marika lamaody ity.
Tamin'ny voalohany dia miresaka momba ny taranaka vaovao iray isika Famantaranandro marika Armani «Connected» miavaka amin'ny efijery AMOLED 1,19 santimetatra sy puce Snapdragon 2100. Amin'izany rehetra izany dia manantena ny hisarika ny sain'ny mpampiasa izay te hanana famantaranandro mpamorona sy ireo fahaiza-manao "marani-tsaina" tadiavina fatratra.
Ny marika lamaody italiana dia nanambara ny smartwatch Connected Wear OS vaovao izay naorin'i Mobvoi, mpanohana ny fampiharana toa ny Tic Health sy ny fivarotana Mobvoi any Shina. Ka tanjona tsara tokoa i Armani amin'ny famantaranandro marani-tsaina izay afaka hiampitana ny ranomasina.
Ny smartwatch Armani vaovao dia misy ny sensor amin'ny tahan'ny fo, ary koa Teknolojia Swimproof hahafahantsika mampiasa azy io eo ambanin'ny fandroana, na dia milomano na misitrika hatramin'ny 3 metatra aza.
Anisan'izany koa ny fiambenana fangatahana handraketana ireo hetsika ara-panatanjahantena rehetra izay ataontsika, ny fampiasana ny sensor GPS sy ny chip NFC hanamarinana ireo fifanakalozana izay hotanterahinay amin'ny Android Pay. Iray amin'ireo mampiavaka azy lehibe indrindra ny manolotra ny fampiasa rehetra an'ny Google Assistant, hahafahantsika mampiasa azy miaraka miaraka amin'ny Google Home sy vokatra G lehibe hafa.
Amin'ny andiany izay hivoaka any Shina, Raha tokony hampiasa Android Pay dia hampiasa Alipay, ary raha tokony ho mpanampy Google ho mpanampy Mobvoi. Ary ahoana no mety hitranga raha tsy izany, famantaranandro avy any Armani malaza dia hamela anao "hitafy" amin'ny fehikibo sy fitambarana samihafa. Manomboka amin'ny volafotsy, volamena mainty sy raozy vita amin'ny volon'ny famantaranandro, hatramin'ny fehy izay misy fehin-tànana na koa hoditra sy harato.
Ny vidin'ny Ny smartwatches vaovao an'i Armani dia manomboka amin'ny $ 295 ka hatramin'ny $ 395. Mety ho avy amin'ny tranokalan'i Armani izay ahafahantsika manao famandrihana famantaranandro mifandraika hiaraka amin'ny fomba amoron-dalana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Armani dia manambara ny fizotrany vaovao miaraka amin'i Google Assistant
Mandresy amin'ny habakabaka amin'ny fandresen'ny Karaz: RPG, fomba fijery Retro ary arcade kely
Ny Vivo NEX S dia mandalo fitsapana fiaretana malaza indrindra